BANOKUBA ZIINGXILIMBELA: UKUJONGWA KWAKHONA KWEALBHAMU YESPINE - IINDABA
I-albhamu yesithoba efanelekileyo kwezi rocker ze-geek ebezikrelekrele ziphawula olunye ungeno kumtya okhulayo ongaphefumlelwanga wokukhutshwa.
Ndifumanise ukuba ukuba u-Google igama lam kwaye ucofe 'kwiziphumo zophando ezishiyiweyo,' uya kunikwa amaphepha asixhenxe okanye asibhozo amakhonkco kwiindawo ezigciniweyo ezinokuthi zibe luhlu lweengxoxo ze-imeyile endiye ndanegalelo kuzo kwiminyaka yam yesikolo esiphakathi kunye nesiphakamileyo . Ukuchwayitiswa ngovuyo ngexesha lesidlo sasemini kwii-terminals ze-UNIX, ezi zikhumbuzi zikanaphakade zezinye izihlandlo ezibuhlungu ezibonisa iingxoxo malunga nokukhutshwa kweGiants zakutshanje kunye neengxoxo malunga nentsingiselo yamazwi anjengokuthi 'faka isandla sakho ngaphakathi kwentloko yoonopopi.' I-TMBG yayiyeyokuqala ibhendi endikhe ndanomdla kuyo, ndifumana naziphi na ii-singles, iibhutsi kunye neevidiyo endinokuzifumana. Kwibanga lesibhozo kwiminyaka ye-grunge, yayikukuphela kwendlela eyaziwayo 'yokunye,' kwaye banikezela indawo ekhuselekileyo yomculo kuye nawuphina umntu onokuthi acinge ukuba ukunxiba i-t-shirt yabantu 'abaqhelekileyo bayandoyikisa. .
Ngenxa yembali yam ebuyisa ibhendi, kunzima ukujongana nenyani yokuba iziphumo ze-TMBG ngokuthe chu ziye zingahambelani kwaye ziphefumlelwe. Inkululeko yabo entsha, Umqolo , is, like so many of their other recent releases, not a bad album, yet contains many too mediocre tracks to be comforting. Eyona nto idanisayo Umqolo kukugcina kwayo umculo. Ubuchule bukaJohn Linnell kulungiselelo kunye nezixhobo, kumboniso opheleleyo kwi-albhamu yakhe ebalaseleyo Iingoma zikaRhulumente , Kubonakala ngathi kuya kungcwatywa ngakumbi ziindonga zegitare xa ziveliswa. Oku ngekhe kube kubi kakhulu ukuba i-duo ibisabhala iihaksi ezikushiye ucula iintsuku ezintathu ekuphulaphuleni umntu omnye, kodwa zimbalwa iingoma ezingalibalekiyo apha.
Njengamantombazana ebanga lesibhozo ahlala endiqhekeza kwaye athi 'awunanjongo' emva kokuba ndizamile isiqhulo, i-TMBG kudala yafumana ileyibhile ecaphukisayo 'ye-quirky.' Njengabaqambi beengoma ezincokolayo iiNtloko eziNtetho, bajongile kwizihloko zezixhobo zasendlini kunye nabalinganiswa abanesono kunokuba baphakamise iimvakalelo zobomi. Ngenxa yokuba amazwi abo ebonakalisile kwi-puns kunye ne-surrealist wordplay, bahlala bebizwa ngokuba 'sisidenge' kunokuba 'arty,' nangona kungekho gama libandakanya iirobhothi ezimbi kunye neengqayi eziqaqambileyo kumbindi wemifanekiso yeGiants. Ke, ngelixa i-TMBG ibingaziwa kwaGqirha Demento kule minyaka idlulileyo, ithoni emnyama okanye ubudenge bendoda buhlala bugcina uburharha babo buneentloni zentsimi ethe ngqo phambili.
Ngokwandayo, ubunzima obunje bulahlekile kwimveliso ye-TMBG, kunye nokunye Umqolo , iinzame zoburharha zinamabala. U-'Au Contraire 'uphumelela ngokupheleleyo kukuhlekisa, kubandakanya uJodie Foster noMahatma Gandhi badlala umdlalo wempikiswano wamakhadi; ngokufanayo, 'Ukunxiba iRaincoat' iqulethe imilambo yeengcinga zokudibanisa ezingenantsingiselo kwiziko lomsebenzi wokuqala webhendi. Ke kwakhona, iingoma ezithi 'Ukuziphindezela' kunye 'nabanye abaNgcolileyo abafuna ukundibetha' azikho kubukrelekrele kunendawo esisiseko sezihloko zabo.
Kuyacaca ngokulula ukuba Umqolo yaveliswa nguPat Dillett, owanceda i-TMBG yobugcisa ngo-1990 Umkhukula . Zombini Umkhukula kwaye Umqolo Unomgangatho wemveliso yemvumi egudileyo, oneseshoni othoba umdla wokuvavanywa komculo weGiants. Ukanti, phi Umkhukula wenze indlela ephumeleleyo ekufikeleleni ngakumbi, Umqolo Isandi esinobuhlobo kunomathotholo sihamba ngaphezulu. Ukuxhaphaka kwezwi kunye nokujika okuphefumlelweyo kwetekhnoloji kuyintlekisa ngokuchasene neethoni zokucula zika-Johns, zikhokelela kwiitrekhi ezivakala ngathi yiFlansburgh kunye neLinnell ngobusuku beKaraoke kune-albhamu yeengoma zabo.
Kukho iingoma eziphumeleleyo apha, nangona zihlala zikhumbuza ukubetha kwangaphambili. I-anthem opener 'yovavanyo lwefilimu' iphantse yayiphindaphinda imbonakalo yeengoma Umonakalo omkhulu weTire ongatshatanga 'uGqr. Worm ', omabini aculwa ngababalisi kodwa bengazichazi izinto ezinamabhongo amancinci obugcisa. UJohn Flansburgh uthethe ngothando lwakhe ngeSinatra, ifuthe lakhe libonakala kakhulu ku 'Ndiphuze, Nyana kaThixo', kwaye ke apha, ubeka ikhondo kumkhondo ogqwesileyo 'Obanjiswe kwiLizwe ngaphambi kwexesha elizayo'. 'Isiqu seNgqolowa' sikwalawula ithoni eyahlukileyo yee-1930s kwisitayile sayo esikhulu sebhendi yokufowuna-kunye nempendulo. Kwaye i-TMBG yenza ubungqongqo kumandla anamandla kwaye abambekayo 'Damn Good Times', isiqwenga sepoppy esinesitayile se-klezmer.
Kule minyaka mihlanu idlulileyo, i-TMBG ibizibandakanye kuluhlu lweeprojekthi ezinomdla. NjengoDanny Elfman kunye noMark Mothersbaugh, bahla ngendlela yeemvumi zerock ezinentloko ezijika iingoma zabaqambi bengoma. Okwangoku, basebenza noDave Eggers kunye nomlawuli uSpike Jonze ukukhupha i-albhamu yesibonelelo iMoveon.org equka uElliott Smith, REM kunye noDavid Byrne. Ngawo onke ama-akhawunti, basabeka yonke into abanayo kwimiboniso yabo bukhoma. Ngayo yonke le nto iqhubekayo, kubonakala ngathi amandla abo okwenyani atshintshelwe kwenye indawo, njenge Umqolo ayindiniki uluvo lokuba iiGiants ngokukhethekileyo zazifuna ukuyenza okanye ukonwaba kakhulu kwinkqubo. Okwangoku, okoko iziphumo zebhendi ziyaqhubeka nokubonelela abafundi basesikolweni phakathi phaya uhlobo oluthile lokuya kwiHoobastank, andinakukwazi ukukhalaza.
tyler, umdali bastard
tyler, umdali igor iingoma
imivumbo elizayo langoku elidlulileyo
Iqela lebhloko likaDave chappelle
Ndikhumbuze ngomso sharon van etten